သားအဖ သုံးယောက် စလုံးတစ်ယောက် တစ်နေရာ စီတိမ်းရှောင် နေရကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ သဇင်ထူးမြင့်…. – Shwe Thuta
သားအဖ သုံးယောက် စလုံးတစ်ယောက် တစ်နေရာ စီတိမ်းရှောင် နေရကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ သဇင်ထူးမြင့်….
N N | March 8, 2021 | Celebrity | No Comments
ချစ် ပရိသတ် အချစ်တော်လေး သဇင်ထူးမြင့် ကတော့ ဖခင် ဖြစ်သူ ခင်လှိုင်ရဲ့ အနုပညာ အမွေတွေကို အပြည့်အဝ ဆက်ခံရရှိထားသူတစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပြီး ပရိသတ် တွေရဲ့ ချစ်ခင်ဝန်းရံအားပေးမှု တွေကိုလည်း အခိုင်အမာရရှိထားသူလေးဖြစ်ပါတယ်။
သူမကတော့ လက်ရှိဖြစ် ပေါ်နေတဲ့ လူထုလှုပ် ရှားမှုတွေမှာ ပြည်သူတွေနဲ့ အတူရပ်တည်ပြီး နေ့စဉ်ပါဝင် လှုပ်ရှားနေသူလေးဖြစ်ပါတယ်။
သဇင်ထူးမြင့်ကတော့ လူထု လှုပ်ရှားမှုတွေကို တက်တက် ကြွကြွနဲ့ ပါဝင် နေသလို ရင်ထဲက ဆန္ဒအမှန် တရားတွေကိုရဲဝံ့စွာ ထုတ်ဖော်ပြသနေတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် စားစရာများနဲ့ သောက်စရာ အအေးတွေကို လည်းတတ်နိုင် သလောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။
အခုတော့ အလှူလုပ်နေရင်း ဖမ်းဝရမ်းထွက် လာတာကြောင့် သားအဖသုံးယောက် လုံးတစ်နေရာစီခွဲပေးနေရတယ် လို့ဆိုပါတယ်။သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာတော့-
“အလှူလုပ်နေရင်း ဝရမ်းထွက်လာ လို့သဲတို့မိသားစု တစ်ယောက်တစ်နေရာစီ ရှောင်လိုက် ကြရပါပြီ…အနုပညာရှင်တွေကို cdmငွေတွေလိမ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့တကွတင်ထားတာတွေတွေ့နေပါတယ်…
ဝရမ်းပြေးတင်မဟုတ် ငွေလိမ်သွားတဲ့သူတွေအဆင့် ထိအရှက်ခွဲခံနေရတာ မိုက်ရိုင်းလွန်းတယ်….အသွေးသားထဲထိနာတယ်နော်…လောလောဆယ်မှာဖေဖေရော အဆင်ပြေ ပါ့မလားကိုကြီးတွက်လည်း စိတ်ပူနေရတယ်ကိုယ်တိုင် လုံခြုံဖို့တွက်လည်း ပူရပြန်တယ်ပြည်
သူတွေအားလုံးတွက် ပူပန်နေရတယ်တစ်ယောက် တစ်နေရာစီနဲ့ဘယ်တော့များမှ မိသားစုတွေပြန် ဆုံခွင့်ရမှာလဲ😓အရှေ့ထွက်လို့မရပေမယ့်လည်း နောက်ကွယ်ကနေဆက်ပြီးအတတ်နိုင်ဆုံးလုပ် သွားမယ် လှူသွားမယ်အိမ် ပြန်ချင်တဲ့တွက်
အရေးတော်ပုံအောင်ကို အောင်ရမယ်💪🏻”လို့ရေးသားထားတာပါ။ ပရိသတ်ကြီးရေ ပရိသတ်တို့ရဲ့ သဲတုန်လေးနဲ့ သဲတုန်လေးရဲ့ဖေဖဖေ ဦးခင်လှိုင် နဲ့ အကိုဖြစ်သူနေ ရဲအတွက်ဆုတောင်ပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။
အိချောပို ရဲ့ ဗွီဒီယိုလေး…
ဆန္ဒထုတ် ဖော်ပွဲတွေကို နေ့တိုင်း ဘာကြောင့်လိုက် ပေးနေတယ်ဆိုတာ ဖခင်ဖြစ်သူက နေမကောင်း တဲ့ကြားက သဘောပေါက် သွားပြီလို့ဆိုလာတဲ့မင်းမော်ကွန်း..
ဘေဘီမောင်ရဲ့ TIK TOK လေး……